वीरेन्द्रनगरबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई टिपरले ठ,क्कर दिँदा २३ वर्षीय ताराको नि,धन, – Wow Sansar
वीरेन्द्रनगरबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई टिपरले ठ,क्कर दिँदा २३ वर्षीय ताराको नि,धन,
January 9, 2021 44
वीरेन्द्रनगरबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई टिपरले ठ,क्कर दिँदा २३ वर्षीय ताराको नि,धन, दुर्घटना लगत्तै अस्पताल लगिए पनि तारालाई बचाउन सकिएन, चालक दुर्गाको अबस्था गम्भिर
काठमाडौँ । भारतीय चर्चित टेलिशृखला बालिका बधुकी फुच्चि अविका गौर अहिले जवान भएकी छिन् । बालिका बधुमा आनन्दीको भूमिका निर्वाह गरेकी अविका ससुराल सिमरकामा सिमरको भूमिकाबाट निकै चर्चित छिन् । बालिका बधुमा फुच्चि रोलमा देखिएका अविकाले बाल कलाकारका रुपमा काम सुरु गरेकी थिइन् । बालिका बधु हुँदै ससुराल सिमरकामा काम सुरु गरेकी सुन्दरी सिमरले लामो समय सोही भूमिकामा राज गरिन् । हाल जवान र सुन्दर बनेकी अविकाले सलमान खानको आगामी फिल्ममा काम गर्ने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा नयाँ नयाँ तस्विरहरु अपलोड गर्दै आइरहेकी छिन् । हेर्नुहोस् तस्विरहरु
गाडी चोरी आरोपमा पक्राउ परेका ब्यक्तिसँग कपिल शर्माको कस्तो लेनदेन ? भारू ५ करोड ७० लाख लेनदेनमा कपिल पनि फसेका हुन् ?
काठमाडौँ । भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा बृला बेलामा विबादमा तानिने पात्र हुन् । आफ्ना सहकर्मी सुनिल ग्रोबरलाई विमानमा नै दुब्र्यबहार गरेको आरोपमा लामो समयदेखि विबाद खेपेर आलोचना बेहोरेका कपिलललाई मुम्बईस्थित अपराध अनुसन्धान विभाग ९सिआइयू०ले बयानका लागि बोलाएको हो ।
गाडी चोरी आरोपमा पक्राउ गरेका व्यक्तिका बारेमा बयान दिन कपिललाई बोलाइएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ । मुम्बईं प्रहरीका गाडी चोरी गर्दै स्वरूप फेरेर बेच्ने आरोपमा दीलिप छाबडिया नामका कार डिजाइनरलाई पक्राउ गरेको थियो। उनैले दिएको बयानका आधारमा कपिललाई थप सोधपुछका लागि बोलाइएको हो । कपिलका अनुसार दीलिपले भ्यान बनाउन भारू ५ करोड ७० लाख लिइसकेका छन्।
रिया चक्रवर्तीलाई आफ्नो प्रेमीका भएको भन्दै अंगोलोमा बेरिएका यि तस्विर शेयर गर्ने ह्याण्डसम को हुन् ? सुशान्तपछि यि युवकको प्रेममा छिन् रिया ?
काठमाडौँ । सुशान्त सिंहकी प्रेमीकाको परिचय पाइसकेकी बलिउड सुन्दरी नायिका रिया चmक्रवर्तीलाई आफ्नो प्रेमीका भएको भन्दै इस्टाग्राममा तस्विर पोष्ट गरेका राजीव लक्ष्‍मणले माफी मागेका छन् । रोडीज फेम राजीव लक्ष्‍मणले इस्टाग्राममा २ वटा तस्विर शेयर गर्दै आफ्नी प्रेमीका भएको भन्दै क्याप्सन समेत लेखेका छन् ।
रिया आफ्नी प्रेमीका भन्दै इस्टाग्राममा उनले पोस्ट गरेको क्याप्सनका कारण उनले आफ्नो शब्द चयन अत्यन्तै खराब भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने समेत उल्लेख गरेका छन् । तस्विरमा रिया राजीवमा अंगोलोमा बेरिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजीवले अहिले उक्त पोष्ट हटाइसकेका छन् । राजीवनले उक्त तस्विर हटाउँदै लेखेका छन् मैले शब्द चयन गर्न नजानेकोमा माफी चाहान्छु । रिया मेरो एउटा असल साथी हुन् ।
Prevटिकटकमा १ करोड़ १२ लाख मान्छेले हेरेको र खोजेको भाइरल सानो भाई इनै हुन-भिडियो हेर्नुहोस
Nextडोनाल्ड ट्रम्पमाथि भयो यस्तो कारवाही, अब सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3722)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (856)